नेपाली वैज्ञानिकको नयाँ अनुसन्धान – Chitwan Post
नेपाली वैज्ञानिकको नयाँ अनुसन्धान
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १४, २०७०
अमेरिकाको नासामा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक डा. लोकनाथ लम्सालले उपग्रहको माध्यमले पृथ्वीको सतहमा भएको प्रदूषण नाइट्रोजन डायअक्साइड (एनओटू) को मात्रा नाप्ने विधिको विकास गरेका छन् । यो विधि प्रयोग गरेर ‘जनसंख्यामा वायु प्रदूषणप्रतिको निर्भरता’ मापन गरिएको यो नै पहिलो हो । उनले बढी वायु प्रदूषण हुने न्यूयोर्क, लन्डन, बेइजिङ र मुम्बईको उपग्रहबाटै सहरको प्रदूषण मापन गरेका हुन् । अमेरिकाको ग्रीनवेल्ट मेरिल्यान्डस्थित नासाको ‘गोडार्ड स्पेस फेलाइट सेन्टर’मा कार्यरत डा. लम्सालले गरेको अनुसन्धानबारे नासाले बेवसाइटमा ‘नासाका वैज्ञानिकहरुले सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र वायु प्रदूषणबीचको सम्बन्ध देखाए’ भनेर उल्लेख गरेको छ । उनले नासाको उपग्रहबाट पृथ्वीको सतहमा एनओटूको सघनता कति छ भनेर पत्ता लगाउने गणितीय मोडल पनि विकास गरेर नासाका वैज्ञानिकहरुबीच नेपालको नाम राख्न सफल भएका छन् ।
तनहुँमा जन्मिएका भौतिकशास्त्री लम्सालले ‘नाइट्रोजन डायअक्साइड’ विश्वका ठूला सहरहरुको प्रमुख समस्या भएको दर्शाएका छन् । प्रदूषण र जनघनत्वबीचको सम्बन्ध विश्वभर फरक हुने पनि उनले अध्ययन गरेका छन् । समान जनसंख्या हुने क्षेत्रमा सहरीकरणले ६ गुणा बढी एनओटू प्रदूषणको सामना गर्नुपर्ने लम्सालले अनुसन्धान गरेका छन् । भारत र चीनलाई हेर्ने हो भने मुम्बईको तुलनामा बेइजिङमा एनओटू प्रदूषण बढी देखिन्छ । तर, जनसंख्या दसौँ गुणा वृद्धि भए पनि प्रदूषण भने आधामात्र फरक पर्ने उनको अध्ययनले देखाएको छ । वैज्ञानिक लम्सालले नेपालका सहरहरुलाई अध्ययनमा नसमेटिए पनि एनओटू प्रदूषणको नतिजा भारतको जस्तै देखिने जनाएका छन् । वायु प्रदूषणको दृष्टिले नेपालका सहरहरु युरोपेली मुलुकभन्दा मानवस्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
मुलुकका अन्य सहरभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण भने बढी भएको उनको ठहर छ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपालका सहरहरुको उपग्रहका माध्यमबाट नाप्न सकिने जनाएका छन् । उनको अध्ययनले युरोपेली मुलुकभन्दा चीनको प्रदूषण बर्सेनि बढिरहेको देखाएको छ । चीनको जनघनत्व वृद्धिले गर्दा बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले प्रदूषण बढिरहेको तर युरोपेली मुलुकहरुमा भने चार प्रतिशतले घटिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा उपयोग र उत्सर्जनले गर्दा यो अन्तर देखिएको हो । डिजेल, कोइला, पेट्रोलबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषित धूवाँ नै एनओटू हो । एनओटूले विभिन्न श्वासप्रश्वासका साथै अन्य जटिल रोग निम्त्याउँछ । उनले प्रदूषित ग्यास बढेर पृथ्वीको सतहनजिक ओजोन तह निर्माण हुने र यो विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बन्ने खतरा औँल्याएका छन् । नेपाली वैज्ञानिक डा. लम्सालले गरेको प्रदूषणसम्बन्धी नयाँ अनुसन्धानबाट मुलुकको शिर उँचो भएकोे छ भने हामी सबै नेपालीलाई गर्व महसुस भएको छ ।
सिडियोको नेतृत्वमा बजार अनुगमन : पुल्चोकका होटलमा कुहिएको मैदा र दाल
धमाधम पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा गरिँदै
अविलम्व वार्ता जरूरी
अर्थमन्त्रीका लागि अन्तिम मौका
थाइराइडबारे सचेतना बाँडौँ
क्वारेन्टाइन विस्तारमा ध्यान देऊ
कोरोना कहरबीच सीमा विवाद
हौसलाभन्दा दुर्व्यवहार बढी भयो : एम्बुलेन्स चालक
गणतन्त्र दिवसमा आठ जनालाई कैद माफी
चन्द समूहका केन्द्रीय नेता गिरफ्तार !